Stadium Mandray Vahiny
Asabotsy 7 Aogositra 2021
Stadium Mandray Vahiny Ny tetikasan'ny Sky lounges vaovao no dingana voalohany amin'ny programa fanavaozana goavana izay tanterahan'i AC Milan sy FC Internazionale, miaraka amin'ny munisipaly any Milan, miaraka amin'ny tanjona hanovàna ny kianja San Siro amin'ny tranobe maro samihafa ary mahavita mampiantrano ny rehetra ireo zava-dehibe lehibe atrehin'i Milano mandritra ny EXPO ho avy 2015. Taorian'ny fahombiazan'ny tetikasa skybox dia nanatanteraka ny hevitra i Ragazzi & Partners fa nanangana foto-kevitra vaovao momba ny toerana fandraisana olona any an-tampon'ny toerana lehibe indrindra amin'ny kianja San Siro.
Birao Kelin'ny Birao Kely
Zoma 6 Aogositra 2021
Birao Kelin'ny Birao Kely Ny endrika anatiny dia namboarina ho an'ny estetika, fa tsy minimal minimal. Ny habaka drafitra misokatra dia hamafisina amin'ny alàlan'ny tsipika madio, fisokafan-dàlambe lehibe izay ahafahan'ny be dia be ao anaty hazavana voajanahary, manome alalana sy fiaramanidina ho singa fototra ara-drafitra sy aestetika. Ny tsy fahampian'ny zoro mety dia mamaritra ny filàna hampifanaraka ny fomba fijery mavitrika kokoa amin'ny habakabaka, raha toa kosa ny fisafidianana palety miloko maivana miaraka amin'ny karazan-jiro sy ara-teknika dia ahafahana manome toerana sy firaisana mirindra. Ny vita vita mivaingana tsy vita dia manandratra amin'ny rindrina hanampiana ny tsy fitoviana eo amin'ny fotsy-malefaka sy malefaka-fotsy.
Alakamisy 5 Aogositra 2021
Zaridaina Ny Tiger Glen Garden dia zahana fisaintsainana naorina ao amin'ny elatry ny Art Museum of Art Johnson. Nomena aingam-panahy tamin'ny fanoharana sinoa iray, antsoina hoe Three Laughers an'ny Tiger Glen, izay naharesy ny tsy fitovizan'ny sekta ny lehilahy telo mba hahitana firaisana fisakaizana. Ny zaridaina dia noforonina tamin'ny endrika austere antsoina hoe karesansui amin'ny teny japoney izay namorona ny sarin'ny natiora miaraka amina vato.
Ny Fanarenana Mody
Alarobia 4 Aogositra 2021
Ny Fanarenana Mody Ny famolavolana tetik'asa dia ny fitazonana ny tontolon'ny tendrombohitra, tsy misy fahatsiarovana fahatsiarovana ny fisian'ireo fiparitahan'ny tendrombohitra an-tendrombohitra. Izy io dia nahitana fanavaozana lehibe ny tranon'ny tendrombohitra mahazatra. Ny zava-drehetra dia hatao amin'ny tranokala, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fitaovana vita amin'ny metaly, hazo kesika ary fivondronan'ny mineraly, asa maha olona ary manam-pahaizana. Ny hevi-dehibe ao ambadik'izany dia ny hamela ny zavatra hividianana sy ny sandan'ny sentimental taorian'ny nahitan'ny tompona azy fa ilaina sy mahazatra izy ireo, ary koa ny hamolavola ny herin'ny fanovana fitaovana ho ao an-tsaina.
Talata 3 Aogositra 2021
Ny Trano Fisakafoanana Ny manaikitra mofomamy ho toy ny lohahevitry ny endrika endrika, sarisary tokana, modely nify, sary an-doha ho an'ny olo-malaza dia ny endri-javatra fototra rehetra dia manampy amin'ny fanentanana ny tsiron'ny tsiron'ny mpanjifa rehetra. Avy amin'ny valindrihana mavokely sy fanorenam-bolo mavo, hatramin'ny rindrina grika fotsy fotsy, mankany amin'ny rindrina fampisehoana vokatra milamina sy miaraka amin'ireo kisary 100 manondro mampiseho taom-polo maro samihafa, mampisafotofoto ny tsiro mainty henatra mainty izay natao.
Ny Famoronana Orinasa
Alatsinainy 2 Aogositra 2021
Ny Famoronana Orinasa Ny azo nafahana dia ny famoronana toerana misy ankehitriny izay manamboatra fitsaboana miorina amin'ny teknolojia mandroso nefa manolotra fitsaboana spaika mahazatra. Ny soso-kevitra vokarina dia ny hamorona habaka mavitrika izay mamoaka ny fahaizan'ny laboratoara siantifika ary manampy fampifangaroana mahazatra ny interiors mafana mafana. Ny fitaomam-panahy ho an'ny lobby an-tany dia avy amin'ny filozofia zen ary ny toetran'ny "cosmos". Lavaplaster fotsy hinting ny antony ara-klinika sy ara-tsiansa antony, sôkôlà volontany avy amin'ny palette mahazatra fika manintona fahatsapana ny filan'ny olombelona.
Prisma Portable Ultrasound Detector Asabotsy 18 Septambra
Baan Ny Kaopy Fisakafoanana Hariva Zoma 17 Septambra
LOTUS Ny Efitrano Fandroana Alakamisy 16 Septambra
Stadium Mandray Vahiny Birao Kelin'ny Birao Kely Zaridaina Ny Fanarenana Mody Ny Trano Fisakafoanana Ny Famoronana Orinasa